राशिफल – Kavreonline Patra
भर्खरै बन्जीजम्पका क्रममा डोरी चुँडिएपछि ८० फिट तल खसेर महिलाको मृत्यु
आजको राशिफल : वि.सं. २०७८ साल कार्तिक ०७ गते आइतबार​, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
नपढ्नेलाई ठुलो दसा लाग्ने छ , आमा लाई सम्झी तस्बिर छोएर ॐ लेखि सेयर गर्नु!!!!!!!
खोलाले ब’गाउँदा ७ वर्षीया बा’लिकाको मृ”त्यु’
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढि Plz फोटो छोएर बाबुलाई Get_well_soon लेख्नुहोस।
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/राशिफल
ष राशि : झंझटिलो समय पनि आइलाग्न सक्छ । विचार पुराउनु होला । के गर्ने अनि के नगर्ने भन्ने कुराको निणर्य लिन कठिनाइ पर्ला । तर पनि पराक्रम भने वृद्धि हुने समय छ । धनलाभ आर्जनका पनि बाटाहरु देखिने छन । राजनीति उतार चढाबमा केहि सहजता बन्ने देखिन्छ ।
वृष राशि : लामो समयदेखि गरिराखेका कामबाट मन अघाएर अर्कतिर लाग्न सक्छ । इष्टमित्रसित भेटघाट हुनाले मन पनि आनन्दित हुनेछ । तर कमाई कम र खर्चबढी हुने देखिन्छ । एउटा न एउटा समस्याले दिमागमा तनाव देला । नयाँ झमेला आइलाग्नेछ । सन्तानले पनि आवश्यकताको पूर्ति गर्ने छन । निराश हुने समय छैन ।
मिथुन राशि : आर्थिक आम्दानी राम्रै संग हुने देखिन्छ । बोल्दा विचार पुराउनु पर्ने दिनछ । पढाइ लेखाइमा पनि मन जानेछ । तर स्वास्थ्यमा भने अवरोध आउला । आफ्नै कारणले बन्न लागेको काम पनि विग्रन सक्छ । राम्रो सपना देख्न सकिने छ । कामका कुरामा धेरै अन्योल रहला । अनि साथ साथै नयाँ कामको वातावरण पनि आउने छ । शरीरमा सामान्य रोगले आघात पुराउन सक्छ । सावधान रहनु होला
कर्कट राशि : मनोरञ्जनात्मक गतिविधि बड्ला । तपाईंले आज समाजमा राम्रो किसिमको छाप छोड्रन सक्नु हुनेछ । तर पनि यात्रा भने असफल रहला । टाउकोमा भएमा नाक कान आंखा आदि अङ्गमा समस्या देखिन सक्छ । आर्थिक पक्षको कुरा गर्नु पर्दा सामान्य खालको दिन छ ।
सिंह राशि : आजको दिन तपाईंकालागि मध्यम खालको छ । आज तपाईंका कामहरु, दाजभाई तथा दिदी बहिनीको सहयोगमा बन्ने देखिन्छन् । तपाईंले आज रुपैया पैसाको काम गर्दा भने धेरै नै जोगिनु होला । पति पत्नि बिचको सम्बन्धमा सुमधूरहने छ भने बोलीको प्रभावका कारण तपाईंले आज प्रेममा सफलता पाउन सक्नु हुनेछ ।
कन्या राशि : रमाइलो वातावरण बन्नेछ । राम्रा कुराको संकेत पाइने छ । सरकारी सेवामा प्रवेश पाउने समय छ । इज्जत वृद्धि हुने काम हुनेछ । भोज तथा खानपिनमा पनि समय वित्नेनेछ । समाजको राजनिति गर्न जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने छ । दुरदेशबाट शुभ समाचार आउने छ । अनि सन्तानबाट पनि सुख मिल्ने समय छ । आफन्तबाट पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त होला ।
तुला राशि : आजको दिन ठिक ठिकैकोछ । सरकारी पक्षबाट केही न केही पुरस्कार वा सम्मान मिल्न सक्छ । सानो कामबाट पनि ठुलै उपलब्धि हात पर्ला । आध्यात्मिक तथा धार्मिक कामगर्न पनि समय अनुकूल छ । यात्राको योग रहेको छ, ज्ञानगुनका कुरा पनि सिक्न र सुन्न पाइएला । नयाँ काम गर्न वातावरण अनुसार यथेष्ट लाभ लिन सकिने छ । मन फुकाएर काम गर्नु नै बेश होला ।
वृश्चिक राशि : रमाइलो कुराहरुमा मन जानेछ । नयाँ कपडा तथा गरगहनामा खर्चगर्नु पर्ने देखिन्छ । यो समयमा पदोन्नती हुन सम्छ अनि तपाईंको सद्व्यवहारबाट अन्या कुरामा पनि सफलता मिल्नेछ । समाजबाट मान पनि प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । तर पनि शारिरिक तथा मानसिक शक्तिमा कमी आउनाले मन भने बेखुशी रहनेछ । परिवारमा रोगले सताउनेछ ।
धनु राशि : विध्यार्थीहरुका लागी राम्रो समयछ, पठनपाठन राम्रै संग मन जानेछ । व्यापार व्यवसायबाट सफलता तथा मान सम्मान प्राप्त गर्नहुनेछ । सन्तान प्राप्तिको योग पनि रहेको छ । शरिरमा स्फूर्ति पनि बड्नेछ । आफन्त तथा मित्रहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
मकर राशि : मन प्रशन्न रहला । रमाइलो गर्नका लागि पनि अवसरहरु मिल्नेछन । सानो कारणले गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन सक्छ सावधान रहनु होला । जग्गा जमिन सँग सम्बन्धित समस्या आउन सक्छ । विध्यार्थीहरुका लागी समय सामान्य मात्र रहेको छ । सोचेका कायहरु पूराहुनेछन ।
कुम्भ राशि : आज तपाईंको घर परिवारले पनि तपाईंको प्रेम प्रसंगलाई राम्ररी लिनेछ । यति हुदाहुदै पनि तपाईंको स्वास्थ्यमा आज केहि खरावी देखिन सक्छ । पुस्तक प्रकाशन तथा विक्रि वितरणको काममा आज नसोचेको फाइदा होला ।
मीन राशि : शत्रु पराजित हुनेछन । यति हुदाहुदै पनि प्रेम प्रसंगमा भने मन मुटाव उत्पन्न हुनसक्छ सावधान रहेर कुरा गर्नु होला । प्रशस्त धन प्राप्ती तथा सवारीसाधन किन्ने योग परेको छ । आफन्त हरुबाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ । जनसम्पर्क पनि बड्ने देखिन्छ ।
हरेक प्रकारका कार्य सिद्धिका लागि कुबेर लक्ष्मी दाहिने भएकाे जग्गा अत्यन्तै शुभ
रबिना टण्डनले दुई अभिनेत्रीका साथ अक्षयलाई रंगेहात पक्राउ गरेपछि…
शनिवार आजको राशिफल हेनुहोस्
दुई हजार वर्ष लगाएर बनाइएको ,भीरमा झुण्डिएको मन्दिर : ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्
डिप्रेसनलाई जितेका कपिलको नयाँ शो कहिलेबाट हेर्न पाइन्छ ?